पर्यटक घुम्न सक्ने वातावरण बनाउँछौं : RajdhaniDaily.com
Homeअन्तर्वार्तापर्यटक घुम्न सक्ने वातावरण बनाउँछौं
पर्यटक घुम्न सक्ने वातावरण बनाउँछौं
यादवप्रसाद कोइराला, सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,
कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र बनेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा थप टेवा पु-याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताउँछन् । कोइराला कुनै पनि योजना बनाउन र कार्यान्वयन गराउने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँछन् । कोइरालासँग पर्यटन क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या, चुनौती र समाधानबारे केन्द्रित रहेर राजधानी दैनिकका रामसूदन तिमिल्सिनाले गरेको संवाद:
कोभिडबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रको अवस्था अहिले कस्तो पाउनुभएको छ ?
पर्यटन व्यवसायलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने विषय अहिलेको सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो । विदेशी मुद्रा भिœयाउने दुईवटा मुख्य क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्र पनि हो । धेरै मुलुकको विदेशी मुद्रा आयआर्जनको मूल क्षेत्र नै पर्यटन क्षेत्र बनेको छ । नोपलमा रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ । कोभिडका कारण यस क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर भएको भए पनि नेपालमा सम्भावना धेरै भएकाले छिट्टै यसलाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ । पुनरुत्थान गर्न हामीले सोहीअनुसार नवीन योजना र कार्यक्रम ल्याउने गरी अघि बढिरहेका छौं ।
त्यो सम्भावना कसरी देख्नुभएको छ ?
नेपालमा जस्तो प्राकृतिक रूपमा नै बनेका साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य अन्त कमै होलान् । त्यसैगरी कोभिडपछि मानिस भिडभाडभन्दा पनि शान्त स्थानमा घुम्न मन पराउने भएको छ । भिडभाडरहित शान्त स्थानको हामी कहाँ कमी छैन । ट्रेकिङका रुट धेरै छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्म ३ सय ट्रेकिङ रूट छन् । ताल तलैया छन्, जंगल सफारी छ । खाली हामीले यी कुरा भजाउन मात्र सक्नुपर्छ ।
कोभिडपछि चुनौती बढेको देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रका थप चुनौती देख्नुभएको छैन ?
अब पर्यटक कसरी आउँछन् भन्ने विषयमा खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्नेहुन्छ । त्यसैले चुनौती हामी कहाँ मात्र होइन सबै क्षेत्रमा छ । यस क्षेत्रलाई जोगाइराख्नु अहिलेको चुनौती हो । तर, कोभिडपछि यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्दा ठूलो आम्दानी हुन्छ । हामीले पर्यटकीय आकर्षणका विषयलाई अझै पनि निषेध पो गरेका छौं कि ? पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्ने अनि विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्ने अवस्था हुँदा मात्र चुनौती हुने हो । हामीले पर्यटकलाई घुम्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । २४ घण्टा उसले उपयोग गर्न सकोस् । मानिस अमेरिकाबाट नेपाल होटलमा सुत्न आउँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
भनेपछि अझै पनि नीतिगत समस्या देख्नुभएको छ ?
नीतिगत रूपमा सच्चाउनुपर्ने विषय छन् । हिजोका दिनमा विकृति भयो भनेर हामीले कतिपय विषयलाई निषेध गरेका छौं । अनुगमन गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ निषेध गर्नुहँुदैन भन्ने हो । व्यवसायीलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । उनीहरूले पनि राज्यको नीति नियमको दायरालाई मान्नुपर्दछ । नीतिगत रूपमा हामी प्रस्ट नहुँदा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि हामीले खुला रूपमा चल्न पो दिएका छैनौं कि भन्ने हो । तर, यति बेला चाहिँ कोभिडबाट थला परेको यो व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने प्रमुख विषय हो । त्यसमा हामी स्पष्ट खाका लिएर आउनुपर्छ त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य थालेका छौं ।
सरकारी निकायबीच नै अन्तरसम्बन्ध नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको भन्ने पनि छ नि ?
विभिन्न स्टकहोल्डरबीच अन्तरसम्बन्ध नभएकाले केही जटिलता देखिएको छ । एउटा काम ११ वटा निकायसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने भएपछि यस क्षेत्रमा कसरी लगानी भिœयाउने भन्ने समस्या छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न होलसेलमा सबै कामको जिम्मेवारी पर्यटन मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । तब मात्रै सहज रूपमा काम हुन्छ । अहिले त वनमा गयो वनले अड्काउने, भूमिमा गयो भूमि सुधारले अड्काउने, गृहमा गयो उसकैमा समय लाग्ने अवस्था छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई पनि प्रभावकारी र चुस्त बनाउनुपर्छ ।
यसका लागि तपार्इंको पहल के हुन्छ त ?
अब अन्तरनिकाय समन्वय चाहिन्छ । सबै संवेदनशील हुनुपर्छ । यो क्षेत्र चलायमान भएन भने भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । सबै निकायले पर्यटन मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि यो राष्ट्रको गौरवसँग जोडिएको विषय भनेर तत्काल परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो दायित्वबोध गर्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले भनेको भरमा हुने कुरा होइन । पर्यटन मन्त्रालय मेरो पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । मेरो घरमा पानी कहाँबाट चुहिन्छ भन्ने मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो छिमेकीलाई ? सम्बन्धित मन्त्रालयको समस्या त्यहीँको सचिवलाई थाहा हुन्छ । यहाँ आफूअनुकूल नीति बनाएको हुन्छ अर्काेलाई त्यो नीति पाच्य हुँदैन । त्यसको अन्त्य गर्न सबैसँग छलफल गरेर सहज रूपमा पर्यटन व्यवसाय अगाडि बढाउन पहल हुन्छ । कोभिड–१९ पछि यो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर व्यवसायीसँग पनि आवश्यकताअनुसार छलफल गर्दै अघि बढ्छौं ।
कोभिड–१९ का कारण अब नयाँ गन्तव्य पनि तोक्नुहुन्छ ?
अहिलेको परिस्थिति र अवस्थालाई ध्यानमा दिएर हामीले कदम चालेको खण्डमा मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौं नत्र पछाडि पर्छाैं । त्यसका लागि नयाँ गन्तव्य तोकिन्छ । तर, पूर्वाधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र पनि तयार हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने आभाष पाएपछि मात्र यस क्षेत्रमा आउने भएकाले त्यसका लागि पनि हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिले त कसैले कुनै नयाँ ठाउँमा पाँचतारे होटल बनाउन थाल्यो भने चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्छ । स्थानीय स्तरबाट यसको समन्वय भएन भने यो क्षेत्रको विकासमा चुनौती हुन्छ । त्यसका लागि हामी आवश्यक पहल गर्छौं । अहिले पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९को चुनौतीबाट सहज रूपमा अवतरण गर्ने नै हो ।
अबको तपार्इंको योजना के छ ?
ट्राभल्स टुर एजेन्सी, रेस्टुरेन्ट, क्युरियो पसल, होटल, रिसोर्टलगायत साहसिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अन्य क्षेत्र प्रभावित भए । कतिपय बन्द भएको अवस्थामा छन् । यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार भएको अवस्था छ । अब ती कर्मचारीलाई पुनरुत्थान गर्न नयाँ समयअनुसारको शिक्षा, ट्रेनिङको आवश्यकता छ । अब हामीे नेपाललाई नयाँ रूपमा ब्रान्डिङ गरेर जाने सोच बनाएका छौं । प्राकृतिक, हिलङ र वेलिनेसको डेस्टिनेसका रूपमा नयाँ रणनीतिबाट पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसलाई सबै स्टकहोल्डरसँग सहकार्य र छलफल गर्छाैं ।
नेपाल एयरलायन्सको डोमेस्टिक यात्रुका लागि अनलाइन टिकेटिङ सिस्टम त लागू भएको छैन भने अरू योजना के लागू होला र भन्ने छ नि ?
नेपाल एयरलाइन्सको डोमेस्टिक यात्रुका लागि अनलाइन टिकेटिङ सिस्टम अब छिट्टै सुरु गर्नुपर्छ । कोभिडपछि सबै क्षेत्र अनलाइनमा गइसक्दा यसले पनि सोहीअनुसारको प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार हामी सुुधार गर्दै अघि बढ्छांै ।
राजधानी समाचारदाता - August 8, 2021
उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१० खैरामा एक युवती आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । कोठामा बाहिरबाट चुक्कुल लगाएको अवस्थामा २१ वर्षीया करिश्मा...
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र ‘पावर सेयरिङ’ सकस देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहितका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास...
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष गजुरेलसहित ३ जना पक्राउ
काठमाडौँ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलसहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको आरआर क्याम्पस अगाडि...
नेपाललाई घरेलु मैदानमा उपाधि जित्ने अवसर
काठमाडौं । थ्री नेसन्स कपका रूपमा ६ वर्षपछि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल फर्किएको छ । यस्तोमा नेपाली टोलीलाई घरेलु मैदानमा सोमबार उपाधि जित्ने...
सुदूरपश्चिमबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाल प्यानललाई साथ
थप १५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १७ हजार ६५८ पुग्यो
प्रचण्डकी नातिनीको गीतमा कार्टुन क्रुको डान्स (भिडियोसहित)
माधव नेपालका बालाई प्रबल, प्रचण्डकी श्रीमतीलाई प्रसिद्ध जनसेवाश्री
सञ्चारमन्त्रीको यस्तो थियो कमिसन संवाद
नेकपाभित्रको गुट नेपाल बारमा पनि
सुभाष साह - September 15, 2021
कम्युनिस्ट घोषणापत्रको सान्दर्भिकता र समाजवादी क्रान्ति
प्रेमलकुमार खनाल - September 19, 2021